जयसिंह धामीको जीवनको मुल्य छैन ? मोदीको विरोध गर्दा देउवाको चित्त दुखेपछि – Classic Khabar
September 6, 2021 65
भारतीय सिमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइनको तार फुस्काएका कारण महाकाली नदिमा हराएका जयसिंह धामीको जीवनको कुनै मुल्य देखिएन । सरकारले अहिले सम्म भारतलाई त्यसवरे औपचारीक जानकारी समेत गराएको छैन । घटना छानविन गर्न बनाएको समितिले भारतीय पक्षसंग कुराकानी समेत नगरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । एक महिना पछि सो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा एसएसबीका २ अधिकारीले तुइनको तार फुस्काएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कुरा सार्वजनिक भएपछि विरोध सुरु भएको छ । काठमाडौ स्थित भारतीय दुतावास अगाडी नेपालीहरुले विरोध प्रदर्शन गरे । आफ्ना नागरिकको ज्यान लिने भारत प्रति बोल्नै नसक्ने सरकारले भारत विरुद्ध प्रदर्शन नगर्नु भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेको छ । गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै भारत विरुद्ध प्रदर्शन गर्नेलाई पक्राउ गर्न सक्ने जनाएको छ ।
सरकारले यो घटनालगत्तै न भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गरायो । न छानविन समितिको प्रतिवेदन आएपछि भारतसमक्ष विरोध जनाइरहेको छ । ३० वर्षीय धामी १५ साउनमा एसएसबीले तुइन खुस्काइदिँदा महाकालीमा बेपत्ता भएका थिए । आफ्ना एक होनाहार नागरिकलाई नियतवस विदेशी सुरक्षाकर्मीले महाकालीमा बेपत्ता पार्दा सरकारको चित्त दुखेन ।
तर, बिडम्बना सरकारलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहनको घटनाले भने निक्कै दुखाएको छ । गृह मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पुत्ला जलाएको भन्दै उनको प्रतिष्ठामा आँच आउने जनाएको छ ।
‘विगत केही दिनयता छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुत्ला दहन गर्ने गतिविधिप्रति गृहमन्त्रायको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता उच्छृङखल र निन्दनीय गतिविधिप्रति मन्त्रालय गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ’ मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘नेपाल सरकार सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग पारस्परिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन चाहन्छ र नेपाली भूमिमा कुनै पनि राष्ट्र विरुद्धका गतिविधि हुन नदिने विषयमा कटिवद्ध छ । मित्रराष्ट्रहरुसँगको स्वाभिमान सम्मान आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न सबैलाई आग्रह गरिन्छ ।’
Prevरोमानियामा नेपाली पुरुषका लागि खुल्यो रोजगारीको अवसर, काठमाडौमा कहाँ राख्ने सम्पर्क ?
Nextहरी उदासीलाई धेरै ठुलो घाटा लाग्यो ? हरीको कागजी श्रीमती भेटे पछी खुल्यो यती ठुलो रहस्य – भिडियो सहित